Bayaan Kasoo Baxay Hogaanka Qurba Joogta Beesha Muusafiin | Cadceed newssite
Bayaan Kasoo Baxay Hogaanka Qurba Joogta Beesha Muusafiin
Oct 1, 2017 Boorama (Cadceed) -Taariikhdu markey ahayd September 27, 2017, abaaro 7:30 aroornimo, ayaa mar qudha la maqley rasaas ka dhacaysa xaafad magaalada Boorama ka mid ah. Waxa xusid mudan ilaa dagaalladii sokeeye aaney dhacda noocan ihi soo marin magaalada. Sida markii danbe la ogaadey, ciidamo booliis lagu sheegey ayaa weerar hubeysan kula waaberiistey qoys aad looga yaqaan gayiga; waa reer Xaaji Cabdillahi Xuseen (Dabshid) Waxa argagixiso loo geystey xamastii naawileysey iney nabad ku waaberiistaan. Waxa si ula kac ah loo toogtey qof kasta oo dhaqaaqey guriga gudihiisa iyo hareerihiisaba. Waxa eega dhakhtarka lagu baxnaaninayaa laba (2) shicib ah askarta duullaanka ahayd ee uu soo direy ninka lagu sheegey taliyaha qaybta booliiska ay toogasho u geysteen.
Haddaba annaga oo ah qurba joogta beelweynta Muusafiin, waxan:
1) dhaleecayneynaa weerarkaa waxshinimada leh ee lagula kacay.
2) waxan xukuumadda ugu baaqeynaa in gacan ku dhiiglahaa amrey weerarkaa hubeysan, isagoo dano siyaasadeed iyo xaalad abuur doorashada ku lug leh ka lahaa, sida ugu dhakhsiyaha badan gobolka looga bedelo.
3) waxan ayideynaa in wixii murumo ah ee ku saabsan dhulka la isku haysto ay maxkamadaha iyo haya’adaha xeer ilaalintu shaqada kaga haboon ka qabsadaan.
4) Shirkii jaraa’id ee ay qabteen taliyaha qaybta booliiska iyo duqa magaalada Borama, oo isagu u muuqdey nin la isticmaalaayey, ay hayd fitno hurin, si danbiga uu galey ninka taliyaha booliiska loola wadaago.
5) waxan ku baaqeynaa nabad ku wada noolaashaha dadka aan is hureynin, wixii is maan dhaaf ah ee yimaadana hay’adaha xeer ilaalinta ama xeer dhaqankii soo jireenka ahaa lagu kala baxo.